Uphando lwesichumiso sezinto eziphilayo rizixhobo
Ngenxa yesichumisi esikhulu semichiza esisetyenziswe kwixesha elide, isiqulatho sezinto eziphilayo emhlabeni sinciphisa ngaphandle kokuthomalalisa isichumiso sendalo.
Eyona njongo iphambili ye- oIsicwangciso sesichumiso se-rganicKukuvelisa isichumiso esisebenzisa izinto ezahlukeneyo ezinezinto eziphilayo kunye nenitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium ekukhuleni kwezityalo. Phambi kokuqala kwesichumiso semveliso yezichumiso, kufuneka wenze uphando ngemakethi yezinto zokwenza izinto eziphilayo zalapha ekhaya. Ukwenza uphando kulwazi olufunekayo kulwakhiwo lwefektri, umz.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ekufezekiseni imveliso ezinzileyo yezichumiso zezinto eziphilayo kukuqinisekisa ukubonelelwa ngokuqhubekayo kwezinto ezisetyenziswayo. Ngenxa yeempawu zomthamo omkhulu kunye nobunzima ekuthuthweni kwezinto zokwenza imveliso, bekungangcono ukuseka umzi-mveliso wakho wezichumiso eziphilayo kwiindawo ezinesibonelelo esaneleyo sezinto eziphilayo, ezinje ngefama enkulu yehagu, ifama yenkukhu njl.
Kwi imveliso yezichumiso eziphilayo Inkqubo, zininzi izinto eziphilayo eziqhelekileyo, uMvelisi uhlala ekhetha eyona nto ininzi ngezinto eziphilayo kunye nokusebenzisa ezinye izinto ezingafunekiyo okanye izinto ezilinganiselweyo zeNPK njengezongezo, umzekelo, umzi-mveliso wezichumiso eziphilayo esekwe kufama, kwaye kukho inkunkuma eninzi yezolimo minyaka le. Imveliso ingathanda ukukhetha umququ wezityalo njengezona zinto ziphambili zisetyenzisiweyo, kunye nomgquba wezilwanyana, i-peat kunye ne-zeolite njengezincedisi.
Ngamafutshane, izinto eziphilayo, eziqukethe izinto eziphilayo kunye nezondlo eziyimfuneko ukukhuthaza ukukhula kwezityalo, zinokusetyenziswa njengempahla eluhlaza kwinkqubo yemveliso yezichumiso zomgquba. Itekhnoloji yokuvelisa inokuyilwa ngokwezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto.
Ukukhethwa kweFektri yoManyolo yeOrganic
Ukukhethwa kwendawo yezityalo zezichumiso eziphilayo kuhambelana kakhulu neendleko zemveliso yexesha elizayo kunye nobudlelwane bokulawulwa kwemveliso. Kuya kufuneka ujonge ikakhulu ezi zinto zilandelayo.
1. Isityalo sesichumiso somgquba asinakuba kude kakhulu nefama. Umgquba wenkukhu kunye nehagu yehagu zibonakaliswa ngumthamo omkhulu, umxholo wamanzi aphezulu kunye nokuhamba okungahambi kakuhle. Ukuba ikude kakhulu nefama, iindleko zothutho lwezixhobo zingavela.
2. Indawo ukusuka kwifama ayinakusondela kakhulu kwaye ayifanelekanga kwicala lokonyuka oluphezulu ngokwemiqathango yefama. Ngaphandle koko, inokuvelisa izifo ezosulelayo, kwaye ibangele nobunzima bokuthintela ubhubhane ukulima.
3. Kumele ihlale kude nendawo yokuhlala okanye indawo yokusebenza. Kwinkqubo okanye kwimveliso yezichumiso eziphilayo, iya kuvelisa iigesi ezingathandekiyo. Ke ngoko, kungangcono ukuhlala kude nokuchaphazela ubomi babantu.
4. Kufanele ukuba ibekwe kwiindawo ezithe tyaba, igeology enzima, itafile enamanzi asezantsi kunye nokungenisa umoya ngokugqwesileyo. Ukongeza, kufanelekile ukunqanda indawo ezithanda ukutyibilika kwisikhukula, isikhukula okanye ukuwa.
5. Isiza kufuneka silungelelaniswe neemeko zengingqi nolondolozo lomhlaba. Sebenzisa ngokupheleleyo umhlaba ongasebenziyo okanye inkqantosi kwaye awuhlali kumhlaba wokulima. Sebenzisa indawo yoqobo engasetyenziswanga kangangoko kunokwenzeka, emva koko unokunciphisa utyalomali.
6. Isityalo sesichumiso esinganyangekiyo ngokukhethekileyo sixande. Indawo yeFektri kufuneka ibe malunga ne-10,000-20,000㎡.
7. Indawo ayinakuba kude kakhulu neentambo zombane ukuze kuncitshiswe ukusetyenziswa kwamandla kunye notyalo-mali kwinkqubo yokuhambisa umbane. Kufanele ukuba ikufuphi nonikezelo lwamanzi ukuze ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zamanzi zemveliso kunye nokuphila.